Kooxda Man City oo saddexda dhibcood ka qaadatay kooxda Burnley oo ku soo booqatay garoonka Etihad… +SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Man City oo saddexda dhibcood ka qaadatay kooxda Burnley oo ku soo booqatay garoonka Etihad… +SAWIRRO
(Manchester) 16 Okt 2021. Kooxda Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad guul kaga gaartay kooxda Burnley, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Daqiiqadii 12-aad kooxda martida loo ahaa ee Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 1-0 ka dhigay laacibka reer Portugal ee Bernardo Silva.
45 + 3′ Aymeric Laporte ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Manchester City.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 2-0 ay kaga adkaatay Manchester City, kooxda Burnley oo marti ugu ahayd garoonka Etihad, City ayaa haatan ku jirta kaalinta labaad ee kala sarreynta Premier League.
Leicester City oo garoonkeeda King Power guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Man United… +SAWIRRO
Chelsea oo si dirqi ah guul kaga soo gaartay kooxda Brentford oo ay booqatay… +SAWIRRO